Uru na ọghọm dị na mgbasa ozi ekwentị na eCommerce | ECommerce ozi ọma
Uru na ọghọm dị na mgbasa ozi ekwentị na eCommerce
José Ignacio | | Marketing, Ahịa ahịa
Ekwentị mgbasa ozi bụ mkpọsa ahụ nke ebumnuche ya bụ ịmalite omume ma ọ bụ mmemme nke ọdịnaya mgbasa ozi na-enye ndị ọrụ ohere ịbịakwute ndị na-ege ntị. Otu ihe e ji mara ụdị mgbasa ozi a bụ na ọ bụ usoro mmekọrịta mmekọrịta amalitere nke etolitere site na site na teknụzụ ọ bụla (laptọọpụ, ekwentị mkpanaaka, mbadamba ma ọ bụ ngwá ọrụ teknụzụ ndị ọzọ).
Ngwa ya na-adọrọ mmasị maka ụlọ ọrụ dị na mpaghara dijitalụ iji kpọtụrụ ndị ahịa ha, ndị na-eweta ngwaahịa ma ọ bụ ndị ọrụ mmekọrịta ndị ọzọ. Ruo n'ókè na ọ nwere ike ịghọ ngwá ọrụ dị ike maka adọta a ukwuu nke ndị ahịa ma ọ bụ nanị ire ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe gị. Site na nke a n'ozuzu, ọ bụ oge dabara adaba ịlele uru na ọghọm nke mgbasa ozi mkpanaka na azụmaahịa ma ọ bụ kọmputa. Maka na ọ ga-adabere n'ọtụtụ ihe, dịka anyị nwere ike ịhụ n'ọdịnihu.
Uru nke mgbasa ozi mkpanaka na eCommerce nwere ike ịdị irè ma ọ bụrụ na a na-ebute ha site na atụmatụ azụmaahịa akọwapụtara nke ọma. Ebee ka etinyekwara mkpa ndị ọrụ n’ọrụ, kamakwa nke soshal midia ebe ozi ga-apụta. Ebe ọ ga-adị mkpa iburu n'uche, dị ka ọmụmụ dị iche iche gbasara ahịa dijitalụ, nke kachasị nke ndị na-azụ ahịa na-enweta weebụsaịtị site na ọtụtụ ngwaọrụ ha na-ejikwa ọtụtụ ngebichi n'usoro.
1 Klaasị mgbasa ozi mkpanaka
2 Uru nke mgbasa ozi mkpanaka na eCommerce
3 Onyinye ndị ọzọ nke mgbasa ozi ekwentị
4 Dis ọghọm nke mgbasa ozi mkpanaka na eCommerce
Klaasị mgbasa ozi mkpanaka
Tupu ịkọwapụta uru na ọghọm ya, ọ ga-adị mkpa ka ị mata ụdị mgbasa ozi mkpanaka ị nwere iji kwalite ọrụ gị site na Internetntanetị.
Display: ndị a bụ usoro ị nwere ike ịgụnye na weebụsaịtị na ekwentị gị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke teknụzụ. Na a dịgasị iche iche nke amụma na i nwere n'oge, na otu nke na-esonụ na-apụta:
Na-enweghị ichefu na na-adịbeghị anya ndị ọzọ formats maka mobile nchọgharị na-abụrụ site na mobiles na na-achọ inwekwu oru mmepe.
Izi ozi gbasara ekwentị: SMS na MMS. N'ezie, ọ bụ ụdị mgbasa ozi dị ugbu a karịa nke ochie, mana nke ahụ na-emezu ebumnuche na ozi a na-akpọ izi ozi mkpanaka.
Bluetooth: Ọ bụghị ụdị mgbasa ozi teknụzụ dị elu, ma ọ dịkarịa ala ọ na-arụ ọrụ site na ihe nkesa mgbasa ozi nke njirimara ndị a.
Mgbasa: anyị na-eche ihu maka usoro dị elu karị maka ịmalite ozi mgbasa ozi nke egwuregwu vidio na-akwado ma yabụ na ọ gaghị emetụta azụmahịa gị na Internetntanetị.
Uru nke mgbasa ozi mkpanaka na eCommerce
Ọ bụghị ihe niile dị oji na ọcha na ụdị mgbasa ozi a. Mana nke mbụ anyị ga-enyocha uru nke a ga-enwe na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmaahịa a na-ahụ anya. Ga - ahụ na enwere karịa karịa ka i si chee site na ụzọ mbu. Yabụ na site ugbu a gaa n'ihu, ị nọ n'ọnọdụ iji uru a na mmepe nke azụmaahịa dijitalụ gị. Mara oge niile na ị ga - amata ihe mgbasa ozi ekwentị na ihe ọ na - abụghị. N'ihi na ọ ga-abụ otu n'ime ihe ga-enyere gị aka ịzụlite atụmatụ ọrụ amamihe dị na ya.
Ozugbo: usoro mgbasa ozi a na-enye gị ohere ịbanye n'ime ndị na-ege ntị. Nke a bụ n'ihi na teknụzụ teknụzụ nwere njirimara ndị a na-enye gị ohere ịbịakwute ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ihe kariri site na uzo ozo ma obu nke ozo.
Mmekọrịta mmekọrịta: Ọ gaghị ekwe omume na site na usoro a ị nwere ike ịmekọrịta n'akụkụ nke ọzọ nke usoro ahụ. Nke ahụ bụ, ya na ndị ahịa gị nwekwara ike ịga n'ihu na kọntaktị ha ma ọ bụ kesaa ha na netwọk mmekọrịta. Ọ bụrụ na ejikọtara mgbasa ozi na netwọkụ mmekọrịta, enwere ike ịmegharị mmetụta ya na nwayọ ma ọ bụrụ na ị mezuo usoro iji nweta ebumnuche akọwapụtara na mbụ.
Laghachi na ego: Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa iji nyochaa mpaghara azụmahịa nke usoro mgbasa ozi a. Ma akụ na ụba na n'echiche a, ọnụ ahịa ọ bụla nwere ike ịba uru karịa site na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ma ụdị azụmaahịa na ndị mgbasa ozi n'onwe ha na-erite uru. Ma ebe obu na gi onwe gi dika onye nwe ngalaba dijital.
Onyinye ndị ọzọ nke mgbasa ozi ekwentị
N'ọnọdụ ọ bụla, enwere uru ndị ọzọ n'iji ụdị mgbasa ozi a yana ị gaghị echefu mgbe ị na-eche mkpọsa mgbasa ozi gị. Ebe otu n'ime ihe kachasị dị mkpa bụ nke sitere na eziokwu ahụ bụ na ị nwere ike ịgbanwe na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndapụta. Site na a mgbasa ozi nke na-esighi ike ma bụrụkwa ihe na-adọrọ mmasị nye ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ omume na-arị elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya iji kwekọọ na ngwaọrụ teknụzụ niile. Dabere na ọtụtụ ọmụmụ ahịa ahịa, ha gosipụtara na nke a bụ omume ebuli elu n'akụkụ profaịlụ njirimara dị iche iche gburugburu ụwa.
Onyinye ọzọ dị ezigbo mkpa metụtara ya na nzụta onwe ha. Ebee, ịzụrụ ihe n'ịntanetị na ọnwa iri na abụọ gara aga emeela ihe karịrị 40% site na ngwaọrụ ndị a na nke a bụ omume na-aga n'ihu na-eto eto na nkeji iri na ise nke afọ 2018. Ruo n'ókè nke igosi na ụlọ ọrụ e-commerce nke chọrọ ịnọgide na-asọmpi ga-edozi usoro azụmahịa ha na iji ekwentị.
Ebe ọzọ dị mma ịhọrọ maka usoro mgbasa ozi a bi n'eziokwu na ọ bụ akụ na-arụ ọrụ maka obere ndị ọchụnta ego na ọkara na mpaghara ahụ n'ihi na ha nwere ike iru ndị nnata ha n'oge kwesịrị ekwesị mgbe ha ga-eme mkpebi ha. ... Ya mere, ọ bụ mgbasa ozi oge na -adị nso na nso onye ọrụ nke nwere ike imetụta mmụba na ịzụ ahịa online. Dị ka nyocha ndị a anyị na-ekpughe n'okpuru:
Ọ bụ mgbasa ozi enwe mmetụta ọsọ ọsọ karị ịga leta.
Su arụmọrụ Ọ bụ ihe karịrị egosipụtara site n'ọtụtụ ọmụmụ.
Se ha kwekọrọ na uto na mkpa nke profaịlụ ọrụ ọhụrụ.
Na-enye ohere mezuo ebumnuche n’oge dị mkpirikpi.
Dis ọghọm nke mgbasa ozi mkpanaka na eCommerce
Ọ bụ ezie na n'ụzọ dị iche, ụdị mgbasa ozi a na-eweta ọtụtụ ọghọm ị chọrọ iji nyocha site n'oge a kọwaa atụmatụ ahịa gị na azụmaahịa dijitalụ ma ọ bụ ụlọ ahịa nke ị nwere. Site na ọnọdụ a n'ozuzu ya, otu n'ime ọghọm ya kachasị dị na eziokwu bụ na ị ga-agbanwe njikwa na azụmaahịa ọkachamara gị. Ruo na ị nwere ọbụna eme ụfọdụ tweaks ka imewe na weebụsaịtị nke ihe onwunwe gị.
Mana ka i nwee nghọta doro anya banyere etu ụdị mgbasa ozi a nwere ike isi merụọ gị ahụ, anyị ga-edepụta ihe ndị ọzọ na-adịghị mma nke ịkụ nzọ ekwentị na azụmahịa kọmputa.
La asọmpi dị oke elu ya mere ị ga-achọ ọtụtụ asọmpi ọdịnaya ka ndị na-ege ntị nwee mmasị na njedebe.
La ntụkwasị obi site akụkụ dị mma nke ndị ọrụ chọrọ ịhụ ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu tupu ịzụta ya n'ịntanetị.
La iguzogide ma ọ bụ mgbagwoju anya a ga-ere ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu site na ọwa ndị a na ahịa ha.
O nwere ike ịbụ ọrụ nke nwere ike ga-esi dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na etinye mmefu niile na njikwa ya na otu nke ndị sitere na mbupu ya kwụpụta.
Ọ bụ ụdị njikwa anyị ga-eme ya nabata tupu ịbanye gị geolocation.
Chọrọ ozi ndị ọzọ maka mmezi ya. Nke a bụ n'ihi na oge ụfọdụ, enwere sistemụ karịa maka otu ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ọzọ. N'ihi na n'ezie ndị na-abịa site na gam akporo, IOS, Blackberry ma ọ bụ Windows Phone 8 abụghị otu.
na mmegharị ego Ọ bụ ihe ọzọ na nke brek na mobile mgbasa ozi. Enwere ike ịkọwa nke a maka obere ihe kpatara na mkpọsa ọ bụla chọrọ mmegharị mkpanaka. Ma n'ihi ihe a, ịkwụ ụgwọ nke anyị ga-eche ihu na azụmaahịa dijitalụ anyị.
N'ọnọdụ ụfọdụ, echefula na ọ nwere ike ịbụ ikpe na amachi ikike onye ọrụ na eziokwu a nwere ike imetụta obere uru na klas a nke mgbasa ozi iji nweta ego na weebụsaịtị nke ụlọ ahịa n'ịntanetị.
Dị ka ị hụworo, enwere usoro nke ọkụ na onyinyo na ngwa nke mgbasa ozi mkpanaka na eCommerce. Ikwesiri itinye ihe abuo n'otu uzo ma bia na nkwubi okwu ma oburu na odi nma ịhọrọ uzo ozo na weebụsaịtị gi. Ọ bụghị n ’ikpe niile a ga - enwe otu azịza ya na ihe niile ga - adabere n’ụdị azụmahịa gị, ebumnuche gị na usoro iji kwalite ya site ugbu a gawa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahịa » Uru na ọghọm dị na mgbasa ozi ekwentị na eCommerce
Kedu nkà ndị onye njikwa eCommerce kwesịrị inwe?
Ndụmọdụ iji mepụta peeji ọdịda zuru oke maka eCommerce gị